GoAnimate: ကာတွန်းဗွီဒီယိုများကိုဒီဇိုင်းဆွဲ၊ ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူးပါ Martech Zone
GoAnimate: ကာတွန်းဗွီဒီယိုများကိုဒီဇိုင်းဆွဲ၊ ဖြန့်ဝေပါ
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 22, 2013 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီနေ့မနက်မှာဗွီဒီယိုကိုတော်တော်လေးအာရုံစိုက်ထားကြလို့ဗျူဟာတိုင်းရဲ့သော့ချက်ကျတာပေါ့။ Animation ကမယုံနိုင်လောက်အောင်အခွင့်အရေးရစေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာစိတ်ကူးသက်ဝင်လှုပ်ရှားသူတစ် ဦး ရှိတယ် ကာတွန်းဗီဒီယိုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် rendering ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်
ပန်းချီဆရာ မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကာတွန်းဗီဒီယိုများ ဖန်တီး၍ စီမံနိုင်သည်။ ယခုမှာသင်သည်တတ်နိုင် 40 လစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြေးပေးသွင်းအပေါ် 3% ချွေတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွဲဖက် link ကိုသုံးနိုင်သည်!
မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗွီဒီယိုတွေပေါ်မှာသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာမမေ့ပါစေနဲ့။ ကာတွန်းဗီဒီယိုကမင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထုတ်ပြောနိုင်တယ်။ သင်သည်ကင်မရာဖြင့်ဖြစ်ရပ်များကို passively ဖမ်းယူထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သငျသညျရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်အကန့်အသတ်မရှိဘဲ, လေးနက်သောအချက်များအောင်ပါတယ်။
သဘာဝတရား၏ဥပဒေများကွေး - Animation သည်အကြေးခွံများလျှော့ချနိုင်ခြင်းနှင့်သဘာဝနိယာမတရားများကိုကွေးခြင်းစွမ်းရည်ဖြင့်ထုတ်ကုန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအမှန်တကယ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။
သင့်ရဲ့အတွေးအခေါ်များကိုအခြေအနေတွင်ပေးပါ သစ်ပင်တစ်ပင်၏အနီးကပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ သစ်တောတစ်ခုလုံးကိုပြသခြင်း၊ ထို့နောက် BIG အပေါ်ဘက်ကြည့်ရှုရန်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွစွာမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ကာတွန်းဗီဒီယိုကအားလုံးကိုလွယ်ကူစွာရှုမြင်စေနိုင်သည်။
မတူကွဲပြားမှုကိုကိုယ်စားပြုသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏စာလုံးများကိုရာနှင့်ချီသောကွဲပြားသောအရောင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မတူကွဲပြားမှုများကိုထိရောက်စွာကိုယ်စားပြုခြင်း၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြိုင်ပွဲသို့မဟုတ်နောက်ခံရှိသရုပ်ဆောင်များကိုချန်စရာမလိုဘဲ။
ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေပါ - ကာတွန်းဗွီဒီယိုများဖြင့်သင်သည်ဗီဒီယိုဖိုင်များဖြင့်ကန့်သတ်မထားပါ။ နောက်ခံများပြောင်းပါ၊ စာလုံးများရွှေ့ပါ။ သင်၏သတင်းစကားကိုဆက်သွယ်နည်းအမျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်ပါ။
အကြံဥာဏ်များကိုရုပ်ပုံများအဖြစ်ပြောင်းပါ - Animation သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု၏အဆင့်များကိုသရုပ်ပြရန်ကောင်းမွန်သည်။ လွယ်ကူစွာပကတိအယူအဆမှအယူအဆနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်နောက်ကွယ်ရှိအတွေးအခေါ်ကိုပြသခြင်းက ပို၍ ပင်ကောင်းသည်။
အကယ်၍ မင်းမှာဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ထဲရှိတာသိပ်ကံကောင်းရင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပုံများကိုပင်တင်နိုင်သည်။ ၃ လစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြေးမှာ ၄၀% ချွေတာပါ။.
Douglas Karr Thursday, August 22, 2013 Sunday, October 4, 2015
သြဂုတ် 22, 2013 မှာ 10: 09 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug ငါဒီထွက်စစ်ဆေးနေပါလိမ့်မယ်!
29:2013 pm တွင်သြဂုတ်လ 9, 28
ကာတွန်းဗီဒီယိုများသည်ကြော်ငြာမဟာဗျူဟာ၏အဓိကရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုစကားလုံးများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများတင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျင်မြန်သောပရိသတ်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထိန်းသိမ်းထားနှုန်းသည်ရိုးရာကြော်ငြာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
Animated ရှင်းလင်းချက်ဗီဒီယိုများ၊ ဗီဒီယိုလုပ်နည်း၊ Whiteboard ကာတွန်းနှင့်အခြားကာတွန်းရှင်းပြဗီဒီယိုများအတွက်၊ ဤလူများကို Explaininja စတူဒီယိုတွင်ကြည့်ရှုလိုပေမည်။